Microsoft Access Jụọ maka Paswọdu mgbe ị na-emepe ọdụ data rụrụ arụ
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Microsoft Access Jụọ maka Paswọdu mgbe ị na-emepe ọdụ data rụrụ arụ
Zuru ezu Ozi banyere njehie na Microsoft Access Jụọ maka Paswọdu mgbe emepe a rụrụ arụ database
Mgbe ị na-eji Microsoft Access imeghe emerụ mana abụghị ezoro ezo Databasenweta faịlụ nchekwa data, ọ ga-apụta na mkparịta ụka “Paswọdu Chọrọ” wee jụọ gị ka ị banye paswọọdụ nchekwa data, dị ka nke a:
Ebe ọ bụ na faịlụ mbụ anaghị ezoro ezo ma ọlị, paswọọdụ ọ bụla ị tinyere, gụnyere eriri efu, ga-eme ka njehie na-esonụ (njehie 3031) wee ghara imeghe faịlụ ahụ:
Ọ bụghị ezigbo okwuntughe.
Nseta ihuenyo ahụ dị ka nke a:
N'ihi nrụrụ aka nke faịlụ nchekwa data Access, Access ga-ewere faịlụ ahụ ezoro ezo dị ka ezoro ezo. Ya mere, ọ ga-ajụ maka a paswọọdụ na-agbalị decrypt ya. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na faịlụ ahụ abụghị ezoro ezo ma ọlị, usoro ntụgharị ga-ada na paswọọdụ ọ bụla mgbe niile.
Nanị ihe ga-eme nsogbu a bụ iji ngwaahịa anyị DataNumen Access Repair imezi MDB faịlụ na idozi njehie a.
Ihe nlele MDB rụrụ arụ nke ga - akpata njehie ahụ. agbụ
Faịlụ rụziri na DataNumen Access Repair: mydb_6_fixed.mdb
DataNumen PDF Repair A tọhapụrụ 3.0 na Mee 4, 2021
DataNumen DBF Repair A tọhapụrụ 2.9 na Mee 4, 2021